Umehluko phakathi kwe-Sunstroke ne-Heat Stroke, ukuthi singazivikela kanjani kubo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinsuku ezinjengalezi lapho sivuka khona nemiphakathi eminingi ezizimele enezexwayiso ngamazinga okushisa aphezulu, ilapho umzimba wethu usengozini enkulu ekushiseni. Kunezeluleko nezeluleko eziningi zokunciphisa imiphumela enayo. Sizithobe ngamanzi, singazivezi emahoreni aphakathi nendawo wokuzivocavoca noma ukusebenza, njll.
Iqiniso ukuthi ukushisa, yize kuqondile, akuhlali kukwenza ngendlela efanayo, akusikho uhlangothi olulodwa. Ngalesi sizathu, sizobona umehluko okhona phakathi kokushaywa ukushisa nokushiswa ukushisa. Bobabili yizifo ezinzima neziyingozi lapho uhlelo lokulawula ukushisa komzimba lungasebenzi.
1 Ukushaywa ukushisa
3 Izimbangela zokushiswa ukushisa noma ukushisa
4 Izici zobungozi
I-Heatstroke yenzeka lapho umzimba usesezingeni lokushisa eliphezulu isikhathi eside. Okwenzekayo kuleli cala ukuthi umzimba awukwazi ukulahlekelwa ukushisa kahle, futhi awukwazi ukubuyisela izinga lokushisa elijwayelekile. Ukukhathala kokushisa kuyisifo esingesihle futhi kungahambisana nezikhukhula zokushisa. Isibonelo, ukuqubuka okungazelelwe, okubuhlungu kwemisipha ezandleni noma emilenzeni futhi kwesinye isikhathi esiswini.
Ukuze ukwazi ukukhuluma ngesifo sohlangothi, izinga lokushisa komzimba womuntu kumele libe ku-40ºC noma ngaphezulu ngenxa yokushisa kwemvelo futhi okubuthakathaka noma ezimweni ezimbi kakhulu, i-thermoregulation engekho. Kubalulekile ukuthi ungawudidanisi nomkhuhlane, ngoba okwamanje akuwona umzimba okhuphula izinga lokushisa kwawo ukulwa nesifo. Awukwazi nje ukuyilanda.
I-Heatstroke noma i-sun stroke, edideka kalula ngokushiswa ukushisa, Kuvela ekuchayekeni isikhathi eside elangeni. Kungandulelwa ukushaywa ukushisa, okubangelwa ukulahleka ngokweqile koketshezi nosawoti wamaminerali ngomjuluko. Lokhu kudala ubuthakathaka obuqinile emzimbeni. Yilapho ukushaywa ukushisa kuphenduka ukushisa okushisa, lapho umzimba ungasakwazi ukugcina izinga lokushisa elijwayelekile.
Izimbangela zokushiswa ukushisa noma ukushisa
Ukuvezwa isikhathi eside ezindaweni ezinokushisa okuphezulu. Kulokhu, sikhuluma ngokushisa okuvamile, okungabangelwa ngumzamo womzimba. Amazinga okushisa aphezulu aqhubekayo kanye nezindawo ezinomswakama, akhetha ukwenzeka kwawo. Imvamisa kwenzeka ngezikhathi ezinde, kusuka ezinsukwini ezimbili noma ezintathu.
Ngenxa yemizamo nokusebenza komzimba emazingeni okushisa aphezulu. Endaweni efudumele, lapho kwenziwa khona imisebenzi yomzimba noma umsebenzi, kulapho sinalolu hlobo lokuphazamiseka ngenxa yokuphoqelela umzimba kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma abantu bengasetshenziselwa ukushisa okuphezulu, maningi amathuba okuthi bahlupheke ngemiphumela yako.
Ziningi nezinye izimbangela okufanele zinakwe. A izingubo ezingaphefumuleki lokho kuvimbela ukuhwamuka komjuluko ukuze umzimba uphole. Yena ukuphuza iziphuzo ezidakayo okuthinta ukonakala komzimba okushisayo okuwuvimbela ukuthi usebenze kahle. FUTHI ngokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ukungabi namanzi anele ngenxa yokulahleka koketshezi ngomjuluko. Kuwo wonke umuntu ngokujwayelekile, kepha ikakhulukazi kubadlali, iphuzu le-hydration libaluleke kakhulu. Uma ulahlekelwa uketshezi ngesilinganiso esisheshayo, kubalulekile ukuthi uphuze ngaphambi kokuthi womile, futhi lokho kuze kube yilapho umzimba umunca uketshezi, kunesikhathi esibekiwe okufanele usicabangele.
Yize kuyinto engenzeka noma ibuphi ubudala, izingane, izingane kanye nabantu abadala yibona abasengozini enkulu. Ngaphansi kweminyaka engu-4 noma ngaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala imvamisa kuthatha isikhathi eside ukuzivumelanisa nezinga lokushisa.
Abasubathi abadlala imidlalo ngesikhathi samahora aphezuluntas, njengokugijima noma ukuhamba ngebhayisikili. Kulezi zimo, ukukuvimbela ukuthi kungenzeki, njengoba siphawulile, i-hydration ibaluleke kakhulu.
Ngezikhathi ezinde emazingeni okushisa aphezulu, ayinayo i-air conditioning. Ukuvezwa okungazelelwe elangeni njengalapho siya olwandle.
Izifo ezingamahlalakhona, njenge-pulmonary, inhliziyo noma ukukhuluphala ngokweqile, ukuba nezindlela zokuphila noma ukuba yisisulu sokushaywa ukushisa esikhathini esedlule, izinombolo zokuhlupheka ziyanda
Futhi ukuze uqede, kubalulekile ukugqamisa ezinye izidakamizwaKubalulekile ukubona ipheshana noma ubuze usokhemisi. Kukhona okunye okubangela ukucinana kwemithambo yegazi. Lezo ezilawula umfutho wegazi ngokuvimba i-adrenaline. I-diuretics ekhipha i-sodium namanzi emzimbeni. Futhi ezinye ezinciphisa izimpawu zengqondo, njenge-anti-depressants noma i-antipsychotic.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Umehluko phakathi kwe-Sunstroke ne-Heat Stroke, ukuthi singazivikela kanjani kubo